Qeybaha Safarka dhabta ah | Wararka Safarka
Wararka Safarka Waxay heshay abaalmarino badan sanadihii la soo dhaafay waxyaabaha ku saabsan safarka. Meelaha ugu wanaagsan iyo hagayaasha dalxiiska ee dalal badan oo ka mid ah 5ta qaaradood. Waxaan si joogta ah u dhajinnaa hanti fara badan oo safar ah iyo heshiisyadii ugu dambeeyay ee huteelada iyo duulimaadyada.
Ujeedadayada boggan waa in fasaxaagu yahay mid ka mid ah waaya-aragnimada ugu fiican noloshaada waana suurtagal in loo mahadceliyo kooxdeena tafatirayaasha ah, safar-bixiyeyaasha globetrotting, kuwaasoo waxaad ku kulmi kartaa halkan.
Meelaha Dalxiiska loo tago